Omunye izinhlobo nophenyo nzulu ubuchwepheshe namalimi wemiphakathi.
ucwaningo neziLimi - is ahlola umbhalo, uzwakalise ngomlomo noma ifomu ebhaliwe impahla (alalelwayo nabukelwayo, ticashunwa temaphephandzaba, izitatimende, izimemezelo, ukukhangisa amapheshana, amanothi, izincwadi, njll). Ubuchwepheshe neziLimi kudinga ukuhambisana isimo esisodwa esibalulekile - umbhalo kumele kube sobala futhi enembile. Uma kungenjalo, olwenziwe Nokuhlola kokuqala lobuchwepheshe, okuyinto ubuyisela izingcezwana elahlekile kombhalo, kususa umsindo alalelwayo nabukelwayo futhi uchwepheshe zezilimi ukukhishwa umbhalo, ngempela eliqinisekiswe yi iziphathimandla abanekhono.
luhlolo neziLimi kombhalo linemigomo ezilandelayo:
uhlinzeke eziyisisekelo futhi inshokutsi lebhacile umqondo wafunda emayunithi elulwimi;
chaza futhi ahumushe etymology kanye inshokutsi yemagama, tisho, imishwana;
ukuhumusha amalungiselelo athile kombhalo (ngokuvamile inkontileka okuphikisanayo) ukusungula ukushintshashintsha ekuqondeni umongo wesimanje isiko ulimi;
ukuhlola umbhalo ngokomzwelo, inkulumo sithuthukiswe wokuboniswa; engasho lutho libhekene, izici lwetakhi telulwimi nesitayela letikhetfwe etheksthini lephelele;
ukuhlonza ukufana noma ukuqondana ephelele ukukhangisa iziqubulo, izinhlobo, izimpawu zokuhweba, njll
Awezolimi Legal isetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
Ngokomthetho lobugebengu - e uphenyo zobugebengu ngaphansi izihloko lapho isenzo lobugebengu ubhekwa ngamazwi: ukunyundela, ukweyisa, nokugqugquzela nenzondo, Ukuthotshiswa ngokohlanga, ngenkolo noma ubuzwe, njll efakiwe. Lokhu kuhlanganisa ukukhangisa yamanga, ukusetshenziswa ngokungemthetho brand, kuphula umthetho we-copyright, ezihlobene, amalungelo patent, ukusabalala izithombe zobulili ezingcolile (ocacile ngokuphelele). Izidakamizwa inkulumo-ze ku ukukhangisa, amapheshana, izincwadi ezinyathelisiwe angasebenza esigebengwini nezokuphatha emkhakheni wezomthetho, kuye neziqu.
Emthethweni civil - e kwecala on izitatimende kwesimangalo mayelana nokuvikela yebhizinisi idumela, nobukhulu, plus ukuvikelwa kwe-copyright, patent, amalungelo umsunguli, njll
Ngo ukulamula umbango - ukufuna ukuqashelwa ezingekho emthethweni (noma okungalungile) Chamber izinqumo ku-patent izingxabano, izingxabano abezindaba ekugqugquzeleni ziyeqisa, kulondolozwe amasiko namagugu, njll
Ubuchwepheshe neziLimi ikuvumela ukuphendula ngokucacile umbuzo zisho sabekwa ibinzana noma indima yombhalo. Ukungafani nokungezwani ngokuvamile kuphakama ngenxa polysemous (emagama) ka isiRashiya.
Kufakiwe lwetakhi telulwimi uxhumano ezikhonjwe ubudlelwane syntactic futhi semantic izixhumanisi zesimo neqhaza ekuboniseni ukuthi lokho okushiwo kuthiweni.
ucwaningo neziLimi nobungoti kwetilwimi - kuba konke tinhlobo tekuhlola kombhalo ukuthi aphethwe amasu nezindlela. Nge omunye umehluko: luhlolo nalokuvalelwa kuphela ngokugunyazwa zokwahlulela, futhi ucwaningo ngokolimi kungenziwa yayala ku uchwepheshe bureau ngisho umuntu yangasese.
Russia Mountains. Uhlu iziqongo eziphakeme kunazo zonke